SARUDZA MUTAURO Albanian Amharic Arabic Armenian (West) Chirungu Chitonga Chuabo Croatian Czech Danish Dutch Finnish German Greenlandic Haitian Creole Hiligaynon Hindi Hungarian Japanese Korean Latvian Luganda Malagasy Malay Nzema Persian Polish Punjabi Romanian Russian Shona Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Tiv Twi Tzotzil Ukrainian Vietnamese Wolaita
MHURI ndiro boka revanhu rekaresa rinozivikanwa, asi nhasi iri mudambudziko. Kupararira kunotyisa kwekushandiswa zvisina kufanira kwemirimo nevechiduku nounzenza, dambudziko razvino uno rokurambana uye masimba masimba mumhuri, kuwedzera kukuru kuri kuita mhuri dzevabereki vasina vakwanyina, uye zvimwe zvinetso zvakakomba zvinoita kuti vamwe vashamisike kuti upenyu hwemhuri huchapukunyuka here.
Zvichiri zvinobvira here kuti mhuri ive mhoteredzo yakadzikama, inochengetedza mitezo yayo? Hongu, kana mitezo yemhuri ichiziva chakavanzika chaicho chomufarwa wemhuri. Chakavanzika chacho hachina kuvigwa. Chakaedzwa chikabudirira kwemazana nemazana amakore. Chii ichocho? Bhuku rino, Chakavanzika Chomufarwa Wemhuri, rinopa mhinduro. Rinopawo mienzaniso inoshanda yokuti “chakavanzika” ichi chinogona sei kubetsera kupedza zvinetso zvemhuri zvakaoma. Pane munhu upi noupi here nhasi asingadi mashoko akadaro?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Kavha Yokuseri